ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အောင်ပါစေ ...
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:54 AM
ko kag said...
ဒေါက်တာ လွဏ်းဆွေ။ လျှင်မြန်စွာ နေကောင်း ကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သပါတယ်ဗျာ။
mg mg thant said...
Dr you go Laiza?
Dr Lwan Shwe
We thougt something is wrong cause blog stop at (1.5.2013).Now we know about what u happen and U can't never die.
God w'll save u.
U are the one for pure democracy and we want u to continue your blog.
Maung Won said...
I personally pray for you to recover your health as soon as possible.
to talk everybody said...
Sein Win said...
Troy, NY said...
You could see :
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၁၁-၂၀၁၃)
I hope you wll come to open blog lun shwe.
Zay Ya said...
Wish you in good health, take care, Bro!
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ မြန်မြန်နေကောင်းဖို့ အတွက်
Kyaw Lwin said...
Wish you best of luck. Get well soon.
ကျနော်အရမ်းလေးစားရတဲ့ ဆရာလွဏ်းဆွေ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်...။
The Four Island said...
သူတို့ တလှေထဲစီး တခရီးကိုသွားနေကြတယ်။
သူဟာ လေယာဉ်စီး လိုရာကောက်ကြောင်းဆွဲနေတယ်။
Min Kyaw said...
Wish Dr. Lun Swe recover completely from his current illness and continue his blog as usual. Take care Saya.
Pls. take care of yr. health to see
DASSK isaPresident.
when you block is not working,I feel I lost the contact with the world. I wish you recover from your illness so soon.
အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်
ရှည်အနာမဲ့လို့ဘ လော့များစာများဆက်လက် ရေးသားနိူင်
ဒီနေ့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ အောင်ပါစေ သီချင်းတင်ပေးထားတာလေး သဘောကျတယ်။
တချို့ အယူအဆတွေမတူပေမယ့် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေမို့ ကျန်းမာပါစေဗျာ၊၊
Uncle လွဏ်းဆွေမြန်မြန်နေကောင်းပါစေ Uncle ဝတ်ဆိုက်မှာ သတင်းတွေတက်မလာတာ
ကျနော့အတွက် ကျနော့အတွက် မျက်စိတွေ
နားတွေ ကန်းနေသလိုခံစားရပါတယ် သစ်ထူးလွင်တို့ 
Myanmar express တို့ ရဲ့မှာတင်တဲ့ သတင်းတွေဟာ
အစိုးရရဲ့ မဟာကောင်းကြောင်းတွေကိုချည်း ရွေးပြီး
ဒါကြောင့် Uncle ကိုပဲ အားကိုးနေရတာပါ uncle
ကျနော်ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလောက်ကို တစ်နေ့ နှစ်ခေါက်ပုံမှန်ရောက်ဖြစ်တယ်။ အခုလို ဒေါက်တာနေမကောင်းမှ ဒီဘလောက်ကို ပိုတန်ဖိုးထားမိလာတယ်။ ဘလောက်ထဲက အရင် မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့စာတွေလည်း ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒေါက်တာနဲ့ ဘလောက်အပေါ် ပိုနားလည်လာမိတယ်။ မြန်မြန်နေကောင်းဖို့.. ကျန်းမာရေး အထူးဂရုစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုပါတယ်ဆရာ..
ကိုလွမ်းဆွေ ကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါသည်
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၁၂-၂၀၁၃)
ဆရာလွဏ်းဆွေ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လဲ အမြန်နေကောင်းပါစေ ဆရာလွဏ်းဆွေခင်ဗျ။ ဆုတွေလဲ အမြဲတောင်းပေးနေပါသည်။ internet မရနိုင်သော နေရာသို့ ခရီးသွားနေသည်ဆိုရင်ဖြစ် အမြန်ပြန်လာရ်ျ သတင်းသစ်များ ဆောင်းပါးအသစ်များကို တင်စေလိုပါပြီ ဆရာလွဏ်းဆွေဗျို့။
အကိုလွဏ်းဆွေ မြန်မြန် ပြန်လည်ပြီး ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းနေပါတယ်။ ။
ဒေါကတာလွမ်းဆွေရေ- ဆောင်းပါးများသတင်းများတင်ထားတာမရှိလို.မဖတ်ရပေမဲ့ အခြားဆိုဒ်တွေကရေးထားတဲ့ သတင်းများကို ဖတ်ပြိးရေးလိုက်ရတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး ကျန်းမာစေဘို.ဆုမွန်ကောင်းတာင်းလိုက်ပါတယ်။
KIA/KIOကချင်တိူ.နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူဘို. လွှတ်တော်မှာ တင်ပြတာတွေ.ရလို. ကချင်ပြည်နယ.်နေတိုင်းရင်းသာများအားလုံးကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို.သော်လည်းအချိန်နဲနဲစောနေသေးသည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ KIA/KIOတိူ.သည် ကောက်ကျစ်၏ စဉ်းလည်း၏ ယုတ်မာ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏ အခြားတိုင်းရင်းသားများကို စုဆောင်းရေးဆွဲ အတင်းအဓမ္မ ရှေ့.တန်းမှအသေခံ စစ်တိုက်ခိုင်း၏ မိန်းကလေးများကို စစ်သမီးလုပ်ခိုင်းပြိး အတင်းအဓမ္မမုဒိန်းကျင့်ကြ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျား၍လည်း မယားငယ်ပြုကြ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်လည်း လူထုကိုမှိုင်းတိုက်၍ စိတ်ဓါတ်ကိုဖျက်ဆိးပြိး အသေခံစစ်တိုက်ခိုင်း၏ ကချင်မဟုတ်သော အခြားတိုင်းရင်းသားများအား လုမျိုးရေးခွဲခြုားပြိး အနိုင်ကျင့်၏ ဘာသာ ရေးခွဲခြားမှုပြုပြိး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြိးများကုိူလည်း
သတ်ဖြတ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြ၏ ဘုရားစေတီတော်များကိုလည်းမိုင်းခွဲဖျက်ဆိးခဲ့ကြ၏ ၂၀၁၀စက်တင်ဘာလက တနိုင်းမြို.နယ် ရှင်ဗွေယံရွှေမှော်အနိးရှိ နန်ဖြူကျေးရွာအနိး ရှေးဟောင်းမိုးကောင်း မြို.ဟောင်းတွင်တည်ရှိသော ရှေးဟောင်း ရပ်တော်မူဆင်းတုတော်မြတ်ကြိးကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့၏ ရှမ်းနီသာသနာသမိုင်းများကို ဖျောက်ဖျက်ခဲ့၏ မဖေါ်ပြနိုင်လောက်အောင် ကမ်းကုန်အောင် မိုက်ရိုင်းယုတ်မာရက်စက်သော KIO/KIAတို.ကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးယူခြင်းဖြင့် သက်ဆိုးမရှေသင့်တော့ပါ။ ၁၉၉၄တွင် ကချင်ပြည်နယ် တနယ်လုံးရှိ ရှမ်းအမျိုးသားများ အားလုံးနှင့် ဥယုမြစ်ရိုးတလျှောက်ရှိ တိုင်းလျှံ (ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများပြည်သူ.စစ်သတင်တန်းများတက်ရောက်ပြိး ရှမ်းပြည်သူ.စစ်များ အာကောင်းလာပြိး ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး KIO/KIAကိုတော်လှန်ကြတော့မည့် အချိန်ကြမှ လူပါးဝပြိး နိုင်ငံတော်နှင့် အမြန်ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့ပြိး ယခုလိုစစ်အင်အားကို ၅၀၀၀၀မှ၁၀၀၀၀၀ကြားအရံအင်းအားပါ အပါအ၀င် ကြိးမားစွာတည်ဆောက်ပြိးမှ
ယခုလိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတောင်အန်တုစိမ်ခေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့၍ ကချင်ပြည်နယ်တခုလုံး ကြေမွပျက်စီးအောင်အနိုင်ကျင်. ဖျက်ဆိးခံနေကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်KIO/KIAတိူ.ကို နောက်ထပ်အခွင့်အရေးမပေးသင့်တော့ပါ။ ပြည်သူလူထုအင်မတန်နစ်နာလွန်းနေပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း လက်ရှောင်နေသင့်ပါသည် ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူဘို. အချန်စောလွန်းပါသေးသည်ဟုပြောကြားလိုပါသည်။ ဒေါ်ဒွဲဘူ ဥိးလနန်တို.လည်း မျက်စေ.ကွယ်နေခြင်း နားပင်းနေခြင်း ဆွံ.အနေခြင်း ရောဂါများကင်းဝေးပြိး ပြည်နယ်နေတိုင်းရင်းသားများ၏ အဖြစ်မှန်များကို အရှိပကတိအတိုင်းဖေါ်ပြနိုင်ကြပါစေ အတ္တလျော့နိုင်ကြပါစေ ဟုဆုတောင်းပါတယ်။
MinnAungHlaing's Father said...
ဟေ့ကောင် သံလမ်းခိုးမသား မင်းတို့ စစ်တပ်ကကောင်တွေက တော်တော် စောက်ရှက်မရှိပါလာကွ။ နိုင်ငံရေး အလဲ့အပြောင်းတခုခုလုပ်ချင်တိုင်း ဗုံးခွဲလာခဲ့တာ အခုမှမဟုတ်ဘူး ဟိုးရှေ့ပဝေသနီကတဲ့က ဒီနည်းကို မင်းတို့ပဲသုံးခဲ့တာ။ ဘယ်သူမှ စောက်ပိုတွေမလုပ်ဘူး ။ ကို့လူမျိုးကို ပြည်သူအပေါ် ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မှ ရက်ရက်စက်စက်မသတ်ဘူးကွ။ပြည်သူတွေကို မပြောနဲ့ ကိုထိုင်ကံတော့ နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကိုတောင် မင်းတို့လို မကောင်းဆိုးဝါး အောက်တန်းစားတွေပဲ သတ်တာ ဒါမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး။အများပြည်သူ တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကားဂိတ်တို့ ရထားလမ်းတို့ ဈေးတို့ supermarket တို့လိုနေရာမျိုးတွေမှာ ဗုံးထောင်ပြီး ဖောက်ခွဲ ပြီးရင် ကိုကြည့်မရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို လက်ညိုးထိုးလို့ အပြစ်ပုံချ ပြည်သူကို မဟုတ်မမှန်တဲ့ ၀ါဒမှိုင်းတွေတို်က် နဲ့ ...အဲဒီနည်းတွေကရိုးနေပြီကွ သံလမ်းရိုးသားဆိုတဲ့ နွားမျိုးရ။ မင်းတို့ကောင်တွေ သူတပါးအပေါ် မတရားလုပ်ရမှ မဟုတ်မမှန်ပြောရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တာလား ဟမ်း။ တိုက်ပွဲနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်တဲ့ လူစီးရထားတို့ ကုန်တင်ရထားတို့ကို ဘာကိစနဲု့kia က သွားပြီး ဗုံးခွဲရမှာလဲ စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ရန်သူကို အဖျက်သမား အကြမ်းဖက်သမား ပုံပေါက်အောင် ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ချင်တာနဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်တွေကို မင်းတို့မလို အဲလို ဗုံးတွေနဲ့ ရက်ရက်စက်စက့်  ဖောက်ခွဲသတ်ဖြတ်ရဲတာ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး ။ ကို့ကိုယ်ကိုလဲ မှန်ထဲပြန်ကြည့်ကျအုံး လူရုပ် ပေါ်သေးရဲ့လားလို့ ... မှန်ထဲကြည့်မှ ခွေးထက်အောက်တန်းကျတဲ့ ကျက်သရေယုတ်အကောင်တကောင်ရဲ့ ရုပ်ကြီးပေါ်လာမှဖြင့်...တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကိုလူမျိုးတွေရဲ့ရွာတွေထဲကို တရွာဝင်တရွာထွက် မုဒိမ်းကျင့်တာမျိုး ဘယ်တော့ကမှ မရှိခဲ့ဘူး ဘယ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်မှလဲ မလုပ်ဘူး။ မင်းတို့ တပ်မတော်တာ တွေ့တဲ့ဘယ်မိန်းမ မဆို သူများသားသမီး လင်ရှိမယားတွေမပြောနဲ့ အိုနာကျိုးကန်းနေတဲ့ အဖွားကြီးတွေပါမချန် အရူးမတောင် အလွတ်မပေးပဲ တွေ့တဲ့ နေရာမှာအရိုင်းအဆိုင်းတွေလို ၀ိုင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့် ပြီးရင် ရက်စက်စွာသတ်ဖျက်တတ်တာ မင်းတို့တပ်မတော်တခုပဲလုပ်တာကွ ။ မင်းတို့လို အရိုင်းအဆိုင်းစိတ်ဝင်နေတဲ့ အောက်တန်းစားတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုတာ မြဲမြဲမှတ်ထားပါ ငိါုးမ သံလမ်းရိုးသားရာ။
soe oo said...
ဒီကိစ္စတွေ အားလုံးရဲ့ တရားခံက အာဏာသိမ်းအဆက်ဆက်စစ်ခေါင်းဆောင်
နဲ့ နယ်မြေခံ တိုင်းတာဝန်ခံ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပွင့်လင်း
ရိုးသားမှု မရှိပဲ မပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုး လုပ်သွားလို့ပဲ။
ကချင်ပြည်နယ်ဟာ အလွန်သာယာပြီး ပျော်စရာတကယ်ကောင်းပါတယ်
ပြည်နယ်ထဲမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ဖော်လံဖားတွေ ရှင်းထုတ်သင့်ပါတယ်။
ပြည်နယ်က အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးပဲ ဂုတ်သွေးစုတ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ဘူဇွါ
တွေ အကျင်ပျက်အရာရှိဆိုး တွေကို KIA အနေနဲ့ ချောင်းမြောင်းသတ်သင့်
တယ် အပြစ်မရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ စီးတဲ့ ရထားကိုမလုပ်နဲ့
အားလုံးရဲ့ အမြင်ကို ဖတ်ရတာ အလွန်သဘောကျပါတယ် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် မိမိအမြင်ကိုဖော်ထုတ် ခွင့် ဆိုတာ ရှိနေသင့်တဲ့ အရာပါ အပြင်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ကြ ရင်တော့ အပြုံး မပျက် အမုန်း မဖက်ပဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ဒါမှ အေးချမ်းသာယာ တဲ့ ဘဝ တွေကို ငါတို့ရော ငါတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကလေးတွေရော ရရှိခံစား နိုင်ကြမှာပါ အားလုံးကို အစဉ်လေးစားလျှက့့်